Waqtiga go'aan-qaadashada ayaa aad u soo dhawaaneysa iyadda oo Nairobi ay "wadnaha farta ku hayso".
NAIROBI, Kenya – Gal-dacwadeedka badda ee u dhaxeeya wadamada deriska ah oo taagan tan iyo sanadkii 2014-kii, markaasi oo ay Muqdisho ka gudbisay Nairobi ayaa u muuqda mid gabagabo ah.
Kiiskan oo horyaala Maxkamada Cadaaladda Caalamiga ah ayaa wax lagu sheegay dhageysiga gar-maqalkiisa ugu dambeeya waxaa dib loo bilaabayaa bisha September ee sanadkan 2019-ka.
Dowladahan ayaa isku haya xuduud dhul-badeed ku taala Badda Cas si gaar ah goob badkeeda lagu qeexay in ka badan 100 KM oo isku wareeg oo dhanka Soomaaliya soo xiga hodan ku ah kheyraad.
Dooda Soomaaliya ayaa ah mid iska cad, waana in ay iyaddu leedahay biyahaasi ay ka buuxaan Shidaalka iyo Gaaska-naqaska ah.
Halka difaaca Kenya uu yahay in mas'uuliyiin Soomaali ah ay u saxiixeen biyahaasi, isla markaana ay iyaddu sidaasi ku sheeganeyso.
Si lamid ah doodaha ay Kenya la hortageyso Maxkamadda ee mudooyinkii dambe sii xoogeystay ayaa waxay yihiin in xeer-beegtada caalamiga ah aysan sharci u lahayn in ay xukmiso doodaasi.
Sharci-yaqaano reer Kenya oo ganafka ku dhuftay dooda dowladood ayaa qiray in ICJ ay awood u leedahay in ay qaado kiiskan, isla markaana ay go’aan ka soo saarto murankan daba dheeraaday.
Nairobi ayaa sidoo kale waxay tan iyo markii la gudbiyey gal-dacwadeedka dalbaneysa in wada hadal lagu dhameeyo muranka labada dal, codsigaasi oo ay daaqadda ka saartay Muqdisho.
Wargeyska reer Nairobi ee Daily Nation oo daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay "Maxay ICJ xal ugu keeni karin isku dhaca Soomaaliya iyo Kenya" ayaa soo bandhigay arrinta ay la harsan la'dahay Kenya.
Qoraaga warbixintaasi oo u gar-naqaya qarankiisa ayaa wuxuu ku doodaya in hadii ay xukmiso ICJ ay ka dhalan karaa ciwaaqib aanan la mahdin.
Isaga oo qeexaya sababta ay Kenya uga soo horjeedo in ay ICJ xukmiso kiiskan ayuu ku tilmaamay; geedi u socodka loo maro go’aan qaadashada oo dheer iyo iyadda oo aanan racfaan laga qaadan karin xukunka.
Kiisaska Afrika ee ay maxkamadda go’aan ka gaartay waxaa kamid ah mid u dhaxeeyay Nigeria iyo Cameroon, balse waa kadib markii ay labada dowladood wada haldeen, sida ku xusan warbixinta.
Olalaha ay Muqdisho iyo Nairobi wadaan ee ku aadan difaacida doodahooda oo ay warbaahinta qayb libaax leh ay ka ciyaareyso ayaa sii xoogeysanaya iyadda oo waqtiga go’aan gaarista uu soo dhow yahay.
Dhanka kale, xiisadda badda ayaa mad-madow soo gelisay cilaaqaadka diblumaasiyadeed ee wadamadan kaasi oo gaarey meeshii ugu adkaa, taariikhda inta la og-yahay.
Afrika 17.07.2019. 11:30